Serchen: Qiimeynta barnaamijkaaga Cloud iyo Qiimaynta Bogga | Martech Zone
Serchen: Qiimeynta barnaamijkaaga Cloud iyo Qiimaynta Bogga
Jimco, Febraayo 21, 2014 Douglas Karr
The Serchen adeegyada suuqa ka badan 10,000 oo iibiyeyaal iyo malaayiin iibsadayaal ah sanadkii. Hadafkoodu waa inay soo saaraan xog ururin weyn oo ku saabsan qiimeynta iyo dib u eegista isku xiri doonta iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha adeegyada daruur ee ugu wanaagsan iyo barnaamijyada qaybaha IaaS, PaaS iyo SaaS.
IaaS - Kaabayaasha ahaan Adeeg ahaan waa nooc bixin ah oo hay'ad ay ku wareejiso qalabka loo isticmaalo in lagu taageero howlaha, oo ay ku jiraan keydinta, qalabka, serverka iyo qeybaha isku xirka. Adeegbixiyaha ayaa iska leh qalabka wuxuuna mas'uul ka yahay guriyeynta, socodsiinta iyo dayactirkiisa. Macaamilku sida caadiga ah wuxuu ku bixiyaa adeegsi ahaan.
SaaS - Software sida Service a waa nooc qaybinta softiweer oo barnaamijyada ay martigeliyaan iibiye ama adeeg bixiye ayna macaamiisha uga helaan shabakad, sida caadiga ah internetka.
PaaS - Madal ahaan Adeeg ahaan waa hab lagu kireysto qalabka, nidaamyada hawlgalka, keydinta iyo awoodda shabakadda internetka. Qaabka adeeg bixinta wuxuu macaamiisha u oggolaanayaa inuu kireysto adeegeyaal akhlaaq leh iyo adeegyo la xiriira oo loogu talagalay socodsiinta codsiyada jira ama horumarinta iyo tijaabinta kuwa cusub.
Goobta si fiican ayaa loo dhigay, oo si fiican loogu qaybiyay meheradaha… waxayna leedahay bar raadis dhab ah oo caqli badan si aad u hesho meelaha aad u baahan tahay. Waxaan u maleynayaa inay weli jiraan tiro barnaamijyo ah oo maqan (dabcan, ma hayno barnaamij kasta oo halkan lagu soo bandhigo, sidoo kale… taasi waxay noqon doontaa wax aan macquul aheyn) iyo dib u eegista ayaa aad u hooseysa xilligan; si kastaba ha noqotee, waa tallaabo aad u wanaagsan oo loo qaaday jihada saxda ah ee lagu dhisayo keyd sidan ah!
Isdiiwaangalin Serchen oo aad dib u eegtaa codsiyada aad jeceshahay - oo aad wax badan ka sii ogaato!
Qeexitaannada Raadinta CloudComputing.
Tags: dib u eegista daruurahadib u eegista software daruurahaiaasdib u eegista tikniyoolajiyaddapaasdib u eegista madalqiimeyntaReviewssaasserchen